Bi-Lact (2.5g x 30 sticks) – SUNNY eSTORE
Bi-Lact (2.5g x 30 sticks)
Medi MyanmarSKU: GM-BILA-1-389 (S022)
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းကို ကျန်းမာစေပြီး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်မအီမသာဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။
Each stick (2.5 g) contains chicory extract,fructoolilgosaccharide,Vegetable cream powder ,magnesium stearate,yogurt flavor powder,
Total Probiotic input amount :
(Lactobacillus acidophilus 1.0 x 1010
Bifidobacterium longum 1.67 x109
Enterococcus fecalis 1.67 x 109
Streptococcus thermophilus 1.5 x 109)
In bowel preparation in medical and surgical treatment
To support for Digestive Health , Healthy intestinal Flora Balance, Natural bowel function, the Body Natural Defence.
Take 1 sachet per day .
ရေအသင့်အတင့်နှင့်ဖျော်ပြီးဖြစ်စေ၊အမှုန့်အတိုင်းစားပြီးနောက် ရေသောက်၍ဖြစ်စေ တစ်နေ့ တစ်ထုပ်နေ့စဥ်ပုံမှန်သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။
နေ့စဥ်ပုံမှန်သောက်သုံးနိုင်သလို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှလည်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
နေ့စဥ်သောက်သုံးပေးဖို့အတွက် ညအိပ်ရာဝင်ချိန်သောက်သုံးပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အစာခြေအက်စစ်ဒဏ်ခံနိုင်စေရန် Microencapsulation နည်းပညာနှင့် ထုတ်လုပ်ထားလို့ အစားစားပြီးဖြစ်စေ မစားခင်ဖြစ်စေ သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
Includes: 1 box of Bi-Lact (30 sticks)